Dhimmichi dhimma dhaaba tokkoo, dhimma ABO qofaa miti dhimma mirgati. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhimmichi dhimma dhaaba tokkoo, dhimma ABO qofaa miti dhimma mirgati.
Dhimmichi dhimma dhaaba tokkoo, dhimma ABO qofaa miti dhimma mirgati. Hogantotoota dhaabaa tokko hidhuun dhaaba hidhuu, dhaaba hidhuun Oromo hidhudha.
Jaal Abdii Raggaasaa erga kalee hidhamee akkuma jaal Nadhii Gammadaa achi jira kan jedhu dhibe.
Jaal Abdii Raggaasaa MSHG-GS ABO kan kaleessa humna waraan marfamee qabame hanga ammaatti bakka itti hidhame hin beekamne.
Maatii fi firoonni akkasumas jaallan isaa erga kaleessa qabamee eegalee bakka eeruu argatan hunda deemuun iyyafatanis namni as jira argeera jedhu hin argamne.
Jaal Abdii Raggaasaa ammaan yoo Oromoon hin iyyaafanne akkuma jaal Nadhii Gammadaa quba nyaachaa hafna.
Tiruun bulte lafee taate akkuma jedhan yaa Oromoo Goota kee Oromoo fi oromiyaaf jecha umuriin itti dhume kana halkan guyyaa har’a boru osoon jenne bakka jirtuu sagalee tahiif.
Gaafa Nadhii Gammadaa dhabamu salphaa fakkaatee erga achi buuteen dhabamee Oromoon hundi gadde.
Gaafa Kol. Gammachuu Ayyaanaa hidhamu namni hedduun maqa balleessii mootummaarraa dhiyaatu fudhatee baga hidhame jedhe. Namni isaaf dubbatu muraasa ture. Gaafa inni mana hidhaatii ba’uufi dhugaan isaa mullatu Oromoon hundi ni gadde; ni gaabbe.
Har’a Jaal Abdii Raggaasaa gaafa hidhamu salphaa namatti fakkaachaa jira. Rakkoo bor Jaal Abdiirra ga’uuf gaabbiin homaa hin fayyadu. Falmannee goota kana harka diinaatii haa baafannu. Jaal Abdiin rasaasa itti dhukaafameen miidhamuufi dhiisuusaa ammallee hin barre. Bakkanni jirullee hin beekamne.
Hayyu duree ABO Obbo Dawud Ibsaa rakkoo ABO fi Mootummaa gidduu irratti maal jedhanii turan? OMN,2018.
Etv Afaan Oromoo was live.
“በኦሮምኛ በመስበካችን የኦነግ አባል ተብለናል! እኛን የሚቃወሙን ቤተክርስቲያንን መለመኛ የሚያደርጉ ናቸው”መምህርና የህግ ባለሙያ ሀ/ሚካኤል ታደሰ Obbo Hailemichael Tadesse
Hoggantoota ABO hidhamuu ilaalchisee marii gabaabaa Dubbi himaa ABO Jaal Toleeraa Adabaa waliin taasifame
For full press release: https://advocacy4oromia.files.wordpress.com/…/press-release…
Callisuu Oromoo fi Agarsiiftuu Karaa Gara Garbummaa Saffisaan Deemaa Jiru:
1, Oromoo godinaan qoodanii ajjeesuu
2, Siidaan Minilik masaraatti yoo dhaabamu kan Maammoo Mazammir marasaan hafee bakka dhaloota isaatti illee dhorkamuu
3, Seenaa Oromoo kitaabota barnoota keessaa haqamee kan Minilikfaan bakka bu’uu
4, Midiyaalee TV 30 fi Radio 50 jiran keessaa, warra Oromoof dubbatan OMN fi ONN irratti addatti itti duuluu
5, Waajjiroota dhaaba siyyaasaa Oromoo cufuu, diiguu fi hooggantoota hidhuu
6, EZEMA fi NAMA (አብን) harka duubaan Oromoo bulchaa fi Oromiyaa diigaa jiraachuu
Iddoo dhiittaan mirga namaa jirutti, bitamuu diduun hundee bilsummaati. Inni toole jedhee bitamu garbadha. Yoo falmanne biyyaa fi mirga keenya ni kabjiifanna. Oromoo ka’ii falmadhu!
Maaltu akka deemaa jiru Oromoon hubachuu dadhabe moo gabrummaa caalshifatee filateetu?
Abiy Ahmed fi Berhanu Nega Oromoo godinaan qoodanii yeroo ajjeesan, isaafis dabareen ajjeechaa akka qaqqabu waan dagateef, Oromoon toole ajjeesi hamma anaan hin ajjeefnetti jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Ciidaan Minilik masaraa mootummaatti dhaabatee
naannoo isaa illee minxaafiin ulfinaa (red carpet) afameefii kabajaan taa’a, yeroo kan goota Oromo Maammoo Mazammir masaraa mootummaa isa guddaa utuu hin taane qe’e dhaloota isaatti ciidaan akka hin dhaabbanbeef orkamu, Oromoon toole kabaji goota Oromoof hin malu jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Kitaabota baroota keessaa, seenaa Oromoo waa’ee duguuggaa sanyii Calanqoo, harkaa fi harma muraa Annolee fi KKF keessaa balkeessanii kan Minilkiifaan bakka buusan, Oromoon toole Oromoon seenaa hin qabu yoo qabaates balleessaa owwaalaa jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Miidiyaan ESAT, ASRAT, Ethio 360 fi KKF yeroo Oromoo kallattii fi cigoon arrabsaa oolan; TV stations 30 fi Radio stations 50 jiran keessaa dhugaa fi dhimma Oromoof kannhojjetan lamitee jiran OMN fi ONN qobaatti baafamanii yeroo himataman fi doorsifaman, Oromoon toole dhugaan Oromoo hin mul’atiin jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Waajjirrii dhaabota siyyaasaa Oromooo yeroo cufamu, saamamuu fi hooggantooti umurii isaanii guutuu aarsaa kaffalanii asiin nu ga’anii har’a uummata isaanii barsiisuu ugguramanii mana hidhaatti gidirfaman, ka biraan yoo hafe mirga walakkaa EZEMA fi NAMA (አብን)faaf laatameeru illee orkaman, Oromoon toole Oromoof dhugaa fi mirgi isaa kabajamuu hin qabu jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Dhaaboti siyyaasaa Oromoo akka diinaa yeroo hundaatti ilaalan EZEMA, NAMA (አብን) fi KKF harka duubaan dabballoota birriin sammuu isaanii gurguraniin Oromiyaa akkaataa halagaan karoorsetti bulchaa fi Oromiyaa diigaa jiraachuu argaa, isa abbootiin keenya waggaa 150f falmaa as geessisan, abbaan qeerroo fi qarree, qeerroo fi qarreenis itti cichanii dhiigaan as geessisan dagachuun ykn gatii dhabsiisuun, Oromoon toole homaa miti Oromoo fi Oromiyaa diigaa, hoggantoita keenyaas girirsaa jechuu kan fakkaatu cici xis-ximbaa utuu hin jedhiin of-balleessuf callisee taa’e!
Warri faranjootaa jecha: “Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves” jedhu sirtiitti itti gargaaramu. Hiikkaan isaa iddoo dhiittaan mirga namaa jirutti: “Bitamuu diduun hundee bilsummaati. Inni toole jedhee bitamu garbadha” jedhe. Oromoo yeroo lagaa fi godinaan qoodamtee ajjeefamtu, mirgi kee sirraa molqamu ka’ii falmadhu! Yoo falmanne biyyaa fi mirga keenya ni kabjiifanna.